नयाँ शक्ति नेपालको ३० बुँदे आचारसंहिता - Nepali Times Australia :: The First Nepali Magazine Published in Australia
नयाँ शक्ति नेपालको ३० बुँदे आचारसंहिता
नयाँ शक्ति नेपालले आफ्ना सबै सदस्यहरूका लागि ३० बुँदे आचारसंहिता जारी गरेको छ।
नयाँ शक्तिले राजनीतिलाई पेशा नभइ सेवा बनाउने तथा जीविकोपार्जनका लागि अलग्गै पेशा गर्ने, जर्बजस्ती चन्दा संकलन नगर्ने, सरकारी सम्पतिको अपचलन नगर्ने, परिवर्तनको सुरुवात आफैंबाट सुरु गर्ने लगायतका विभिन्न ३० बुँदा समावेश गरेर आचारसंहिता जारी गरेको हो।
नयाँ शक्ति नेपालका संयोजक डा. बाबुराम भट्टराईले शनिबार अन्तरिम केन्द्रीय परिषद्का सदस्यहरूलाई आचारसंहिता पालना गर्न प्रतिबद्ध रहेको भनी सपथ खुवाएका छन्। संगठन संरचना निर्धारण, नेताहरूको कार्यविभाजन लगायतका विषयमा निर्णय लिनका लागि सुरु भएको बैठकको सुरुमा संयोजक डा. भट्टराईले सबै सदस्यहरूलाई सामूहिक रुपमा सपथ खुवाएका हुन्।
नयाँ शक्ति नेपालका प्रवक्ता खिमलाल देवकोटाले ३० बुँदे आचारसंहिता अन्तरिम केन्द्रीय परिषद्का सदस्यका अलावा नयाँ शक्तिमा लाग्ने सबैले अनिवार्य रुपमा पालना गर्नुपर्ने बताए।
३० बुँदे आचार संहिता जस्ताको तस्तै